Multicopter waa kaaliyaha ugu fiican ee wax ka qabashada beerta - Magazine Nidaamka Baradhada
Bogga guriga Digest Sayniska
Multicopter waa kaaliyaha ugu fiican ee farsamaynta goobta
в Sayniska, News, Isbeddellada / Isbeddellada, Injineerinka / Teknolojiyada, Ecology
Gobolka Yaroslavl, waxay bilaabeen inay isticmaalaan multicopter si ay ugu buufiyaan sunta cayayaanka, bacriminta iyo beeritaanka. Mashruuca tijaabada ah waxaa fulinaya shirkadda beeraha ee Agromir, adeegga saxaafadda ee Wasaaradda Beeraha ee Ruushka.
"Drone waxay faa'iido u leedahay kiisaska marka qalabka ay maamulaan darawaladu aysan dhaafi karin garoonka sababtoo ah xaaladaha cimilada ama sababo kale," ayuu yiri Artem Pochernin, Agaasimaha Guud ee shirkadda. "Intaa waxaa dheer, isticmaalkeedu wuxuu ogolaanayaa in laga fogaado waxyeellada dalagyada ee taayirrada baabuurta beeraha."
Agrodrone waxay ku duuli kartaa xawaare dhan 7 mitir ilbiriqsikii. Haanta waxaa loogu talagalay 30 litir oo dareere ah, oo ku filan 12 daqiiqo oo duulimaad ah, ka dib markaa kaaliyaha hawadu wuxuu ku soo noqdaa si uu u buuxiyo oo u buuxiyo. Siddeed saacadood oo shaqo ah, cagaf leh buufiye ayaa socodsiin kara 60 hektar, iyo kobter - 130.
Quadcopters kaliya ma fududeeyaan oo ka raqiisan yihiin inay ka shaqeeyaan goobta, laakiin sidoo kale waxay u oggolaadaan dadka inay ka fogaadaan khatarta caafimaad ee ku shaqeynta kiimikooyinka halista ah. Mid ka mid ah hawl-wadeennada ayaa hal mar ka maamuli kara saddex diyaaradood oo aan duuliye lahayn.
Sannadkan, aagga khudradda dhulka furan ayaa labanlaabmay dhulka ganacsiga iyo 7% - oo hoos yimaada baradhada beerashada.
"Haddii tijaabada loo arko in lagu guuleysto, Agromir wuxuu iibsan doonaa laba kale oo multicopter ah, kaas oo si buuxda u dabooli doona baahida ganacsiga ee beerashada," ayuu yiri Natalia Dugina, oo ah Agaasime kuxigeenka Waaxda Agro-Industrial Complex iyo Suuqa Macmiilka ee Gobolka Yaroslavl. Shirkaddu waxay heshaa cabbirro kala duwan oo taageerada gobolka ah. Gaar ahaan, 2021, waxaa loo qoondeeyay 56,2 milyan oo rubles qaab kabitaan ah oo loogu talagalay iibsashada mashiinnada beeraha iyo qalabka, quudinta, wax soo saarka iyo koritaanka caanaha, shaqada agrotechnology iyo iibsashada kaydka taranka. Intaa waxaa dheer, shirkadu waxay heshay deyn door bid ah iyo 7,6 milyan oo rubi oo kabitaan ah miisaaniyadda federaalka. "
Tags: diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee beerahaWasaaradda Beerahadaaweynta ilaalinta dhirta
Qiimaha basasha ayaa kor u kacaya Ruushka
Goosashada 2020: Waa maxay sababta Beeralayda Yukreeniyaan u Khasaartay Khasaaraha